Ukudibana kwendalo - I-Airbnb
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguMario
Indlu entle ekufutshane kakhulu nedolophu, ekulula ukuyifikelela, enabo bonke ubutofotofo bokuhlala kwakho nabahlobo nentsapho. Inamagumbi okuthi zava, axhotyiswe kakuhle, igumbi lokuhlala, ikhitshi, igumbi lokutyela, iindawo ezinkulu zokuphola nokucingisisa indalo, kunye nenkampani yakho ebalaseleyo, ukufunda kakuhle, ikofu emnandi, isiselo okanye isidlo esimnandi. Indawo yokupaka neendawo zokudlala ezaneleyo. Indawo yasekuhlaleni okanye indawo yokoja oza kuyisebenzisa nosapho okanye umhlobo kunye negumbi labucala lemicimbi
Yindlu enamagumbi aliqela, enamagumbi okulala ayi-4 anamagumbi aliqela aneebhedi ezimbini zeKumkanikazi, igumbi lokuhlambela labucala namanzi ashushu. Ikhitshi elikhulu, igumbi lokuhlala, igumbi lokutyela, indawo yokubasa umlilo yangaphakathi. Ngaphandle unokonwabela ummandla obanzi wangaphambili kunye neetreyini, kunye nendawo yoluntu kunye negadi enkulu. Kukho indawo yokupaka iimoto eziyi-4 kwindawo yokupaka esecaleni kwendlu yeendwendwe. Kukho negumbi labucala lemicimbi ekhethekileyo. Sisondele kakhulu kwindlela ephambili kunye nedolophu.
\_u00A0Iibhedi ezinkulu eziyi-2, Ibhedi ekuthiwa yi-hammock eyi-1
Le ndlu ikwisithuba seekhilomitha eziyi-1 ukusuka kwipaki ephakathi eValle de Angeles, ejikelezwe yindalo, kwaye ikufutshane neentaba ukuba uyakuthanda ukudonga. Iikhilomitha eziyi-150 ukusuka kwindlela ephambili nehamba ngeenyawo.
Zonke izinto ezifunwayo ziza kufumaneka kwisayithi, kodwa ukuba kukho uncedo okanye uncedo siza kufumaneka ngalo lonke ixesha ukuze uhlale kamnandi.